Flight Center na-etinye 25% Stake na 3Mundi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Flight Center na-etinye 25% Stake na 3Mundi
Airlines • Akụkọ na -agbasa ozi Argentina • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • Finland na -agbasa ozi ọma • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Mmelite nke Njem njem
Flight Center Travel Group (FCTG), otu n’ime ụlọ ọrụ njem njem kachasị ukwuu n’ụwa, emekwuola nkwado ụkwụ njem ụlọ ọrụ ya na Europe.
Companylọ ọrụ Australia, nke nwetara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na nso nso a na Denmark, Finland, Germany, Norway na Sweden, taa kwupụtara nkwekọrịta itinye ego na ntinye 25% nke njem njem na teknụzụ, 3mundi, nke nwere arụmọrụ na France, Switzerland Spain. A na-atụ anya ka itinye ego ahụ na ọkwa ya na July 2017.
Na 2015, 3mundi ghọrọ onye mmekọ na onye ikikere na France na Switzerland maka ngalaba FCTG nke isi ụlọ ọrụ njegharị ụwa, FCM Travel Solutions, ma na-ere ahịa n'okpuru akara FCM kemgbe 2016.
3mundi guzobere na 2006 site na Jordy Staelen na Simon Renaud dị ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-ejikọ teknụzụ dị elu na ikike mmadụ iji bulie ọrụ njem azụmahịa. 3mundi etolitela n'ike n'ike na-eto kwa afọ kwa afọ nke 37.8 pasent n'etiti 2012 na 2016. emplolọ ọrụ ahụ na-eji ndị ọrụ 115 nọ n'ọfịs ya na Paris, Geneva na Barcelona ma ugbu a dịka otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na Europe na FT 1000.
Kemgbe ọ ghọrọ onye mmekọ FCM na France, 3mundi emeriela ndị ọhụụ ọhụụ gụnyere PriceWaterhouseCoopers, ọkachamara injinia mba ụwa Fives Group yana CNRS kachasị ọhụrụ (French National Center for Scientific Research). Nke ikpeazụ a na-emefu njem azụmahịa kwa afọ nke € 35M.
Na mgbakwunye na azụmaahịa njem ụlọ ọrụ ya na France na Switzerland, 3mundi na-arụ ọrụ ụlọ nyocha njem azụmaahịa na Barcelona, ​​nke na-aga nke ọma na-emepe emepe teknụzụ na ngwaọrụ maka njem njem.
"FCM na 3mundi enweela mmekọrịta dị mma kemgbe 2015 ma obi dị anyị ụtọ na anyị na onye anyị na France na Switzerland ga-enwe mmekọrịta siri ike karịa nke a," ka Steve Norris, onye isi ụlọ ọrụ na - ahụ maka ụgbọ elu - EMEA kwuru, Flight Center Travel Group . “France na Switzerland bụ ụlọ ọrụ njem ụlọ ọrụ dị mkpa maka ndị ahịa anyị dị ugbu a yana maka akaụntụ ọhụrụ ọtụtụ mba na anyị na-ezubere iche n’ụwa. Ntinye ego a ga-eme ka ụkwụ FCM sikwuo ike n'ahịa ndị a, ma kwado atụmatụ anyị maka ịgbasa ọnụnọ anyị na Europe, nke gụnyere UK, Ireland, Netherlands, Sweden, Finland, Norway na Denmark.
Jordy Staelen, onye isi njikwa, 3Mundi kwuru, sị: “Anyị na-atụ anya ka anyị na FCM na Flight Center Travel Group dịkwuo nso. Ntinye ego a bụ ezigbo akụkọ maka ndị ahịa na ndị ọrụ anyị. Ọ na-enye anyị ohere ịbawanye ma rite uru site na ike FCM zuru ụwa ọnụ, ngwaahịa, ọrụ na teknụzụ. ”
FCTG ulo oru mbo na 3mundi bu nke ohuru n’ime otutu teknụzụ na e-commerce nkwalite ekwuputara na nso nso a. N’ọnwa gara aga, FLT kwupụtara na ya enwetala mmasị 24.1 na Bibam, otu ndị njem na teknụzụ nke dabeere na Argentina nwere ọnụnọ siri ike na oge ezumike na n'ịntanetị, ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa n’ùkwù. Bibam (Biblos América), ìgwè nke abụọ kachasị na Argentina, nwere ma na-arụ ọrụ Biblos na ngwa ngwa e-commerce na-eto ngwa ngwa Avantrip.com. Ihe nkwekọrịta a ga-enye FLT ikike azụmaahịa dijitalụ emeziwanye site na ịnweta usoro ikpo okwu e-commerce nke Bibam na ndị mmepe sọftụwia.